Malunga | Oxford isiXhosa Living Dictionaries
Yintoni inkqubo ye-Oxford Global Languages?
I-Oxford Global Languages (OGL) liphulo elikhulu le-OUP lokwakha amancedo abhaliweyo eelwimi ezi-100 zehlabathi nokuzenza zibekho kwi-intanethi. Okokuqala ngqa, inani elikhulu lezinga yenkcazelo yolwimi lwendidi ezininzi zeelwimi eziza kuyilwa ngokolandelwano, ziqokelwe, zize zenziwe zibekho, zidityaniswe kwindawo enye, kwizithethi, kubafundi nakubaphuhlisi. Injongo yale nkqubo kukutshintsha amava ezigidi zabantu ehlabathini lonke ngokwenza isiqulatho solwimi lwabo sibekho ngokohlobo oludijithali, kwiiwebhusayithi, kwiiaphu, nakwizixhobo neenkonzo ezininzi ezahlukeneyo.
Iphulo le-OGL liza:
Kwakha isiqulatho ngokunxulumene neelwimi ezisetyenziswayo, kuquka ukwahluka nokuyelelana kwazo, ukuzibhala ngokwendlela ezisetyenziswa ngayo namhlanje
Landise ufikelelo lwehlabathi kumancedo olwimi ngokwakha ugcino olukhulu lwenkcazelo yolwimi olufikelelekayo, lunxulumene, yaye lunokuphinda lusetyenziswe
Libangela kubekho uphuhliso lwezixhobo namancedo amatsha adijithali okuhlaziya kwakhona nokuxhasa iilwimi zehlabathi
Landisa ulwazi nomoya wokhathalela abantu bolwimi kwihlabathi
ZIZIPHI IILWIMI EZIZA KUQUKWA?
i-OGL inenjongo yokuba neelwimi okungenani ezi-100 zizonke ibe siyazi ukuba oku kungathatha iminyaka emininzi ukukuphumeza. Siqale nje ngeelwimi ezilishumi kuphela ezahluke kakhulu ngokusuka kudederhu lweengingqi, ngalunye lunamazinga ahlukahlukeneyo okubakho dijithali, ukuze zibonise imigaqo ye-OGL zize zicelumngeni uqikelelo lwethu njengoko sihamba. Njengoko sisiya phambili siza kuqhubeka siquka iilwimi ezahlukeneyo kokubini ezehlabathi kunye neelwimi ezingaxhaphakanga dijithali.
I-Oxford Global Languages isungule isayithi yayo yeelwimi ezimbini, isiZulu isiSuthu saseMntla, ngo 2015, iilwimi ezi-10 ziye zalandela kunyaka wokuqala, kunye nezingakumbi ezongezwayo kwiminyaka embalwa elandelayo.
Ufuna ukwazi okungakumbi?
Sisebenza ngokusondeleyo nabantu bolwimi lwasekuhlaleni ukuze siyile izichazi-magama eziphilayo. Injongo yethu kukuba abasebenzisi bazive beyinxalenye yokuxhasa nokuphuhlisa amancedo olwimi lwabo.
I-OGL idibanisa ubugcisa be-OUP bedijithali kunye nokutyeba okubanzi nomkhamo wenkqubo yezichazi-magama zehlabathi.
Injongo ye-OUP njengesebe leYunivesithi yaseOxford kukwandisa ulwazi nokufunda kwiimpapasho zayo ezisemagqabini.
Phawula: Iziko lenkcazelo yolwimi kule webhusayithi yaqala ukupapashwa yi-Oxford University Press Southern Africa Pty (Ltd) ngo 2014 njenge-Oxford Bilingual School Dictionary: IsiXhosa nesiNgesi (umhleli oyintloko nguMary Reynolds, ummeli womhleli oyintloko nguG-M de Schryver) ibe ziqukwe apha ngokuvumelana nabakwa-OUPSA. © Oxford University Press Southern Africa Pty (Ltd) 2014, kuquka uluhlu lwamagama aziintloko kwisiNgesi nakwisiXhosa.
Bona ukuba loluphi ulwimi olusele lusungulwe, uze ukhangele ulwimi lwakho